नाटक गर्न सजिलो
मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिनाटक गर्न सजिलो
आज विवाह पञ्चमी । धार्मिक मान्यताअनुसार राम र जानकीको विवाह आजैका दिन भएको थियो रे ! कन्टिर–बाबू यस अवसरमा सबैलाई शुभकामना दिन्छन् । शुभकामनासँगै उनी एक टिप्पणी पनि गर्छन्– मिथिलाक्षेत्रमा बिहे गर्न आजको दिनलाई सबैले शुभ मान्छन् । आजको दिन बिहे गर्न केटा–केटीको मरिहत्ते हेरी नसक्नुहुन्छ । तथापि परम्पराको आकर्षण नयाँ पुस्तामा हुनु राम्रो कुरा हो ।
कन्टिर–बाबू प्रश्न गर्छन्– तर किन कोही पनि राम र जानकीलाई आफ्नो आदर्श मान्न व्यवहारतः तयार हुँदैनन ? मिथिलामै पनि आजको दिनलाई शुभ त मानिन्छ तर कुनै पनि अभिभावक छोरीलाई जानकीको त्यागको बाटोमा हिँडाउन तयार देखिँदैनन् । छोरालाई रामको मर्यादामा बस्न यथार्थमा प्रेरित गर्दैनन् ?
अरे यार … रामलीला, नाटक गर्न सजिलो छ, तर नाटकमा प्रस्तुत मर्यादायुक्त पात्रझैँ वास्तविक जीवन बाँच्न त गाह्रो हुन्छ नि, कन्टिर–बाबु सोध्छन्– कि कसो जानकी माता ?
कन्टिर–बाबू टिप्पणी मर्यादा विवाह पञ्चमी